စက်ဘီးအတွက်ဘဲလ် ဆိုတာဘာလဲ။ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံး စက်ဘီးအတွက်ဘဲလ် မှအကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေရန်
JANG HORNG ENTERPRISE CO.,LTD., ထုတ်လုပ်သူနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အထူးပြုသောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း စက်ဘီးအတွက်ဘဲလ်။ intensive သုတေသန၏နှစ်ကျော်စုဆောင်းပြီးနောက်တွင်အကြီးဆုံးနှင့်အများဆုံးနာမည်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ခြင်းကအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြ Taiwan။ မှုကြောင့်မြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်ငှါ, ငါတို့ထုတ်ကုန်ကမ္ဘာတဝှမ်းထက်ပိုနိုင်ငံပေါင်း 20 မှတင်ပို့ရောင်းချကြသည်။ သင်ကယုံကြည်ကိုးစားထိုက်သောမိတ်ဖက်ကိုရှာဖွေနေပါသည်ဆိုလျှင်သင်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်ကိုရေတွက်နိုင်ကြ။ ကျနော်တို့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ကျနော်တို့မကြာမီကာလအတွင်း၌သင်တို့နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ထုတ်ကုန်အဘက်ဘက်မှအထောက်အကူဟာ Thread ၏ပရီမီယံရဲ့အရည်အသွေးနဲ့ဒီဇိုင်းပန်းထိုးနေကြတယ်။ အရည်အသွေးပြည့်စာမေးပွဲစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သာအပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောထုတ်ကုန်နာယကများ '' ဥပစာများအတွက်စေလွှတ်ခဲ့ကြောင်းသေချာစေသည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်အတွက်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။
ပုံစံ - JH8AL CP
ITEM:MINI ALLOY BELL ဖြစ်သည်
ထုပ်ပိုးသည်:1 pc/အိတ်,20 PCs/box 200 PCs/ctn
ဆး.ဒဗလျူ.:6 KGS G.ဒဗလျူ.:8 KGS CUFT:၁.၁
ချိန်ညှိနိုင်သောစက်ဘီးခေါင်းလောင်း:၃-သားရေကွင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစား ၂ ခုနှင့်အလွှာချိတ်,စက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည်သင်လိုအပ်သည့်အတိုင်းချိန်ညှိရန်လွယ်ကူသည်;အချင်း ၂၂ မှစက်ဘီးလက်ကိုင်အများစုအတွက်သင့်တော်သည်-၃၅ မီလီမီတာ/၀ ယ်သည်.၈၇-၁.၃၈ လက်မ;၎င်းသည်ကွဲပြားသောစက်ဘီးများနှင့်သက်ဆိုင်သည်
တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်:တပ်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားရန်ကိရိယာများမလိုအပ်ပါ;၎င်းကို ၁ မိနစ်အတွင်းလက်ကိုင်တွင်အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည်
ကျယ်ပြန့် applications များ:universal စက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည်လမ်းစက်ဘီးနှင့်လိုက်ဖက်သည်,တောင်တက်စက်ဘီး,မြို့စက်ဘီး,အားကစားစက်ဘီး,ကလေး’စက်ဘီး,ခရူဇာစက်ဘီး,MTB စက်ဘီး,BMX စက်ဘီး,လျှပ်စစ် Scooter,စသည်တို့.,စက်ဘီးခေါင်းလောင်းကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်နိုင်သည်,သို့မဟုတ်သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုများကိုလက်တွေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ပို့ပါ
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bike-bell.com/my/bell-for-bicycle.html
အကောင်းဆုံး စက်ဘီးအတွက်ဘဲလ် ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် စက်ဘီးအတွက်ဘဲလ် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ဖြူးသူ၊ Taiwan
ပစ္စည်း:ပလပ်စတစ်အောက်ခံနှင့်လီဗာ.အရွယ်အစား:၅၅ မီလီမီတာထုပ်ပိုးသည်:1 pc/PE,10pc/box 200pcs/ctn.၁.၆ အုပ်.ဆး.ဒဗလျူ.:၁၀ ကီလိုဂရမ်ဂျီ.ဒဗလျူ.:၁၂ ကီလိုဂရမ် 22MM Pipe Handlebar အတွက် Santa Claus ပုံနှိပ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းပါ ၀ င်သောစက်ဘီး Ring Ring သတိပေးချက်ဘဲလ်:အလူမီနီယံစက်ဘီးလက်စွပ်ခေါင်းလောင်းကိုလုံခြုံရေးသတိပေးခေါင်းလောင်းအဖြစ်တောင်တက်စက်ဘီးများနှင့်လမ်းဘီးများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်. တာရှည်ခံအသုံးပြုမှုအတွက်အထူးကောင်းမွန်သောပစ္စည်းများ:စက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောအလူမီနီယမ်နှင့်အင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသည် တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်:စက်ဘီးများအတွက်လက်ကိုင်ပြွန်အပြင်ဘက်အချင်းသည် ၂၂ မီလီမီတာရှိသည်.ဝက်အူလှည့်ဖြင့်ဝက်အူလှည့်ကိုလက်ကိုင်ဘားတွင်ဝက်အူကိုတင်းကျပ်လိုက်ပါ. CRISP တီးမှုတ်သံကိုကြည်လင်ပြတ်သားစွာနားထောင်ပါ:ဖက်ရှင်အမြင်နှင့်အတူအလူမီနီယံစက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည်ကြည်လင်ပြတ်သားသောအသံမြည်သံကိုအမြဲပေးသည်